Wuhan Pixel Box Cinema Shineemo - Joornaalka Naqshadeynta
Shineemo “Pixel” waa aasaaska aasaasiga ah ee sawirrada, nashqadeeyaha wuxuu sahamiyaa xiriirka dhaqdhaqaaqa iyo pixel si uu u noqdo dulucda qaabeynta. "Pixel" waxaa lagu dabaqaa meelo kala duwan oo shineemo ah. Sanduuqa xafiiska weyn ee hoyga ayaa leh baqshad aad u weyn oo lagu sameeyay in ka badan 6000 oo guntin oo darbiyada birta ah. Darbiga muuqaalka ayaa lagu qurxiyay qaddar aad u badan oo xarigyo labajibbaarane ah oo ka soo baxaya gidaarka ayaa soo bandhigaya magaca quruxda badan ee shineemo. Gudaha shineemada, qof walba wuxuu ku raaxeysanayaa jawiga weyn ee adduunka dijitaalka ah ee ay abuurtay isku xirnaanta dhammaan walxaha “Pixel”.
Magaca mashruuca : Wuhan Pixel Box Cinema, Magaca naqshadeeyayaasha : One Plus Partnership Limited, Magaca macmiilka : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..
Shineemo One Plus Partnership Limited Wuhan Pixel Box Cinema